Shiinaha Khadka Mashiinka Buuxinta Mashiinka Shiinaha iyo alaableyda | Higee
Khadka mashiinka buuxinta wuxuu si ballaaran ugu habboon yahay walxaha dareeraha sare leh ee buuxinaya xirashada iyo calaamadeynta. Waxaan ku qalabeyn karnaa khadka oo dhan min feeder ilaa dhalada aruuriyaha oo leh khadka soo saarista malab dhameystiran.
Khadka mashiinka buuxinta malabka ee otomaatiga ah
Mashiinka buuxinta malabku wuxuu ku haboon yahay buuxinta malabka dhadhanka kaladuwan ama dareeraha sare ee fiilooyinka PET ama dhalooyinka dhalada ah oo udhaxeeya 100ml ilaa 500ml
Mashiinka miiska jeedsada ee dhalada lagu shito iyo dhalada malabku ku shubto ayaa lagu dhex galayaa hal mashiin. Mashiinkayagu si buuxda ayuu otomaatig u yahay oo wuxuu leeyahay qaab cilmiyaysan oo macquul ah. Sidoo kale muuqaal qurxoon iyo howlo dhameystiran, way fududahay in la shaqeeyo lana ilaaliyo.
Bedelka dhalada waa fududahay. Looma baahna in la hagaajiyo dhererka mashiinka iyada oo loo marayo qoorta haynta gaadiidka dhalada. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad bedesho qalabka dayactirka.
Dhalada ayaa dhex marta buuxinta iyo xoqitaanka leh xoqid yar. Gawaarida buuxinta xawaaraha sare waxay hubineysaa xawaaraha sare iyo xakamaynta heerka dareeraha saxda ah.
Dhamaanteen waxaan u isticmaalnaa 304 bir birta ah ama walxaha heerka cuntada ah si aan u hubino tayada sare ee mashiinkeena. Nidaamka xakamaynta PLC ayaa la isticmaalaa oo qaybaha korontada ayaa isticmaalaya nooc caan ah sida Mitsubishi Siemens Schneider iyo wixii la mid ah.
Hore: Khadka mashiinka buuxinta saliida muhiimka ah
Xiga: Khadka Mashiinka Buuxinta Awoodda Sare